Akhriso Sababtii Loo Xiran Xafiiska xuquuqda aadanaha Qaramada Midoobe ee Burundi – XOGMAAL.COM
Guddoomiyaha Midowga Afrika ayey dowladda Burundi ku eedeysay in uu xiriir wanaagsan la leeyahay xubnaha Mucaaridka ah ee jooga Adis ababa kuwaas oo ka shaqeynaya in xukuumadda Pierre Nkununziza meesha ka baxdo.
Dowladda Burundi ayaa shaacisay in ay xirtay Xafisyada xuquuqda aadanaha ee hoostaga Qaramada Midoobey kuwaas oo ka furnaa Afar magaalo oo ku yaalla dalka Burundi.
Arrintan ayaa daba socota iyada oo uu sii xumaanayo xiriirka Dalka Burundi iyo Hay’adaha Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobey.
Go’aanka Burundi ay ku xirtay xaisyadan ayaa la xiriira caro dowladda Burundi ay ka qaadday go’aanka Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobey ay ku amreen Burundi in 1,000 ka mid ah Ciidankeeda jooga Soomaaliya ay la baxdo Bisha soo socota.
Dhamaadkii Bishii la soo dhaafay Dowladda Burundi ayaa sheegtay in Ciidankeeda jooga Soomaaliya aysan kun ka mid ah bixineyn iyada oo ku sifeysay cunaqabateyn la saarayo dalkeeda sidoo kalena ay tahay in waddamada ku jira AMISOM ay qeybsadaan tirada Ciidanka baxaya.
Go’aanka lagu saarayo Ciidanka Burundi ayaa la xiriira kaddib markii dowladda Madaxweyne Pierre Nkununziza, lagu eedeeyay in ay xadgudub ku sameysay xuquuqda aadanaha si xad ka bax ahna ula dhaqantay dadka mucaaridka ah.
Xaisyada Qaramada Midoobey laanteeda xuquuqda aadanaha ee la xiray waxaa ay ku kala yaallaan Caasimadda Bujumbura, Magaalada Makamba oo ku taalla Koofurta Dalka iyo labada.
Weerar lagu qaaday hoyga uu Muqdisho ka dagan yahay guddoomiyaha degmada….